China FIBC PE Firimu Bhodhoro Rakaumbwa Rine Liner Kuisa Chisimbiso Kucheka Muchina fekitori uye vagadziri | VYT
Bhodhoro remutsipa bhegi remukati rinoumba muchina inotora PLC system, uye mota yekugezesa inotyairwa neepamberi AC AC servo yekudhinda tekinoroji, iyo ine hunhu hombe torque, kushanda kwakanyanya, kumhanya kwakadzikama uye pasi ruzha. Dhizaini yekushanda kwepaneru yakapesana, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana; iyo system inotora chiChinese dhizaini dhizaini, iri nyore pakuisa uye kugadzirisa.
1 Pe bhegi, M, upamhi, mm, 1200 (Max)
2 Kureba kwebhegi remukati (mm) 2500-3000mm
3 Kucheka kunyatsoita (mm） ± 10mm
4 Simba rekugadzira （pc / h） 60-120
5 tembiricha controller 0-350 ℃
6 Simba rese 36Kw
8 yakamanikidzwa mweya 10Kg / cm2
9 Kuisa zviyero （mm） 2200 * 2100 （Kusanganisira yemagetsi cabinet3100） * 1800
10 Machine uremu （makirogiramu 3000kg
11 Zvinoshanda zvinhu LDPE, HDPE, NYLON coextrusion firimu
Kuchengetedza zvigadzirwa mukati mehombodo hombe kubva kune chero zvikonzero zvezvakatipoteredza zvekumisa zvinhu kuguruva kunze kwebhegi hombe, liner rinofanira kuiswa mukati. Yedu bhodhoro chimiro liner yekuisa chisimbiso muchina yakagadzirirwa kuumba liner nekuisa chisimbiso nekucheka mashandiro, inokodzera mana malupu hombe bhegi muviri, uchizadza spout uye kuburitsa spout.
Ndokumbirawo usashandise chishandiso ichi munzvimbo inotevera:
1. Iko kusiyanisa kwemagetsi kuchapfuura ± 10% yemafiriza echando echando.
2. Simba rekugonesa harigone kuvimbiswa munzvimbo ine chinzvimbo chakatarwa.
3. Tembiricha yekamuri iri pazasi pe 0 ℃ kana pamusoro pe 35 ℃.
4. Kunze kana nzvimbo iyo chiedza chezuva chichajeka zvakananga.
5. Nzvimbo iri pedyo neheater (heater yemagetsi).
6. Nzvimbo dzine humhutu hwakadzikira pazasi pe45% kana kupfuura 85% nenzvimbo dzine dova.
7. Inoparadza kana nzvimbo ine guruva.
8. Nzvimbo dzinotarisana nekuputika kwegesi kana kuputika kwemafuta.
9.Kana nzvimbo pakaiswa muchina webhodhoro bhegi unogadzira muchina wakajairika kunyanyisa kudedera, isa bhokisi rekutonga mune imwe nzvimbo.
1. Bhokisi rekutonga:
Ndokumbirawo uteedzere rairo kuti umise nenzira kwayo. Bhokisi rekutonga risati rasunganidzwa nemagetsi, ndokumbira utarise kana simba remagetsi rinobatanidzwa rakaenzana nemhepo yakatarwa pabhokisi rekutonga, uye magetsi anogona kupihwa chete mushure mekusimbisa chinzvimbo. Kana paine shanduko yemagetsi, yakafanana kuti utarise pamberi pemagetsi. Panguva ino, bhatani mhando magetsi switch pane bhodhoro mutsipa wemukati bhegi kugadzira muchina inofanirwa kuiswa pa [off].
Ndapota usamanikidza tambo yemagetsi negiravhiti kana kuimonyorora zvakanyanya. Ndapota usaise tambo yemagetsi padyo nechikamu chinotenderera, ingangoita 25 mm kure.
Kuti tidzivirire kuvhunduka kwemagetsi kunokonzerwa nekukanganisa ruzha uye kubuda kwemagetsi, waya yekumisikidza pane tambo yemagetsi inofanira kuiswa pasi zvakanaka. Kana iwe uchida kubatanidza mudziyo wekushandisa wemagetsi, ndapota tevera chinzvimbo chakaratidzirwa.
4. Kubvarura nekukatanura:
Kuti ubvise bhokisi rekutonga, unofanirwa kutanga wadzima simba uye vhura plug yemagetsi. Paunenge uchiburitsa plug yemagetsi, usangodhonza tambo yemagetsi, unofanira kubata plug yemagetsi neruoko woiburitsa kunze. Iko kune ngozi ine magetsi akanyanya mubhokisi rekutonga, saka kuti uvhure bhokisi rekutonga, unofanirwa kudzima simba uye kumirira kweanopfuura maminetsi mashanu usati wavhura bhokisi rekutonga.
Kugadziriswa, kuongorora uye kugadzirisa.
Basa rekugadzirisa nekugadzirisa rinofanira kuitwa nevanyanzvi vakadzidziswa.
Ndokumbira ubvise simba kana uchinja mucheki uye ufe cutter.
Ndapota shandisai zvechokwadi zvikamu.
Pashure: Otomatiki Jumbo Bags Kuchenesa Machin Mhepo Washer FIBC Inosuka ESP-B - VYT
Zvadaro: FIBC Jumbo Bhegi Yekuchenesa Muchina ESP-A
Bottle Neck Liner Kuiswa chisimbiso Machine
Pe Big Bhegi Kuchenesa Kuisa Chisimbiso Uye Kucheka Muchina
Pe Big Bhegi Kuchenesa Kuisa Mucheka Muchina